एउटा उडानले फरक पार्छ पर्यटनमा! :: रवीन्द्र शाही :: Setopati
एउटा उडानले फरक पार्छ पर्यटनमा!
रवीन्द्र शाही काठमाडौं, कात्तिक २६
गत वर्षको तुलनामा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या ८ प्रतिशत बढेको छ।
नेपाल पर्यटन बोर्डले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार सन् २०१९ को ८ महिनामा ९ लाख ७५ हजार विदेशी नेपाल घुम्न आएका छन्। पोहोर साल यही अवधिमा ९ लाख ३ हजार विदेशी नेपाल आएका थिए।
केही निश्चित मुलुकबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।
तीमध्ये एक हो- थाइल्याण्ड। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपालि ३२ प्रतिशत धेर थाई पर्यटक नेपाल आएका छन्।
नेपाल आउने पर्यटकको प्रतिशत बढ्ने मुलुकमा थाइल्याण्ड दोस्रो नम्बरमा छ। थाइल्यान्डको भन्दा धेरै वृद्धिदर चाइनिज ताइपेई छ। त्यहाँबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या पोहोरभन्दा ३७.५ प्रतिशत बढेको छ। संख्याका हिसाबमा भने ताइपेईबाट आउने पर्यटक ३ हजारले बढेका छन्।
सन् २०१९ को आठ महिनामा थाइल्याण्डबाट ३९ हजार ६०८ पर्यटक नेपाल आएका छन्। सन् २०१८ को त्यही अवधिमा नेपाल आउने थाईको संख्या २९ हजार थियो।
किन बढे थाइल्याण्डका पर्यटक?
थाई पर्यटक बढ्नुको मुख्य कारण हो- सस्तो र सिधा हवाइ उडान।
थाइल्यान्डको बजेट एयरलाइन्स थाइलायनले नेपाल उडान सुरू गरेको एक वर्ष पुरा भएको छ। थाइलायनको आगमनसँगै नेपाल आउने पर्यटकमा वृद्धि भएको छ। यो अवधिमा नेपाल आउने थाईमात्र होइन थाइल्याण्ड जाने नेपाली बढेका छन्।
थाइ लायनले नेपाल उडान २०१८ को अगष्टमा उडान सुरू गरेको थियो। त्यसपछिका महिनामा उल्लेख्य रूपमा थाइ पर्यटक नेपाल आउने क्रम बढेको छ।
सन् २०१८ अन्तिम २ महिनामात्र २२ हजार थाइले नेपाल भ्रमण गरेका थिए।
अहिले थाइल्यान्ड-नेपाल रूटमा तीन एयरलाइन्सको सिधा उडान छ।
यीमध्ये सबैभन्दा सस्तो भाडा थाइलायनकै हो। बुधबार लागि थाइल्यान्डबाट काठमाडौं आउने उडानको भाडा हेर्दा पनि त्यो देखिन्छ।
भोलिका लागि थाइल्याण्डबाट काठमाडौंको सुरूआती भाडा थाइलायनमा १७ हजार रुपैयाँ छ भने थाइ एयरवेज ३९ हजार छ। नेपाल एयरलाइन्समा २७ हजारबाट भाडा सुरू हुन्छ।
यद्यपी एयरलाइन्सको भाडादर सधैँ एउटै भने हुँदैन।
एयरलाइन्सले सुरूमा महंगो दरमा टिकट खुला गर्छन्। त्यही भाडामा सिट भरिन थालेपछि भाडा घटाउँदैनन्। जब उडान गर्ने समय र दिन नजिकिँदै जान्छ अनि भाडा पनि सस्तो हुँदै जान्छ।
ट्राभल एजेन्टनुसार पनि भाडामा कहिलेकाहिँ फरक पर्न जान्छ। थाइलायन बजेट एयरलाइन्स भएकाले यसको भाडा अन्य एयरलाइन्सको तुलनामा सस्तो हुने गर्छ।
थाइलायनको भाडामात्र सस्तो होइन, उसले यात्रुका लागि नयाँ विकल्प पनि दिएको छ। नेपाल एयरलाइन्स र थाइले बैंककको सुवर्णभूमि विमानस्थलबाट उडान गर्छन्। थाइलायनले भने डनमेङ विमानस्थलबाट उडान गर्छ। थाइलायनको उडान १५ मिनेट छिटो छ।
गन्तव्य पर्वद्धन र यात्रा सहजताका लागि एयरलाइन्सको संख्या थपिनु पर्यटनका लागि सञ्जिविनी बुटीकै काम गर्ने पर्यटन व्यवसायी विजय अमात्यको भनाइ छ।
'हामीकहाँ पहिले थाइले नेपाल जाउ भनेर उताको बजारमा प्रवर्द्धन गर्‍यो। किनभने त्यहाँ उसको बिजनेस थियो। त्यसपछि अन्य एयरलाइन्स पनि थपिंदै गए र नेपालको प्रवर्द्धन हुँदै गयो,' उनले भने।
तर नेपालमा बजेट एयरलाइन्सको सेवा धेरै छैन। विदेशी एयरलाइन्स धेरैजसो नर्मल एयरलाइन्स छन्।
पर्यटकका लागि बजेट एयरलाइन्सको निकै महत्व हुने अमात्यले बताए।
बजेट एयरलाइन्सले प्रवर्द्धन धेरै गर्दैनन्। तर उनीहरूले सस्तो भाडामा सेवा दिन्छन्। जसका कारण पहिलेको महंगो भाडामा जो आउन सकेका थिएनन्, उनीहरू आउँछन्।
थाइलायनको उडानले यस्तै प्रभाव पारेको अमात्यको बुझाइ छ।
पर्यटक आगमनमा हवाई सेवाले महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निवर्तमान महानिर्देशक सञ्जिव गौतमले बताए।
'हामी पनि कतै जाँदा त्यहाँ जाने माध्यम खोज्छौं। सिधै जान सकिन्छ कि सकिँदैन। विश्वानीय छ कि छैन। त्यसपछि त्यसको भाडा हेर्छौं,' उनले भने,'मान्छेहरूले सहज पहुँच हुने ठाउँमा जान खोज्छन्। हाम्रो सन्दर्भमा यस्तो पहुँचको माध्यम एयरलाइन्स हो।'
सहज र सस्तो दरमा यात्रा खोज्नेहरुका लागि बजेट एयरलाइन्सको उडान सेवाले स्वभाविक रूपमा पर्यटक आकर्षित गर्ने गौतमको भनाइ छ।
एयरलाइन्सले कति फरक पार्छ भन्ने कुरा भारतको जेट एयरवेजको उडान बन्द हुँदा त्यसको असर नेपाली पर्यटनमा देखिएको छ।
जेटले युरोपियन तथा अमेरिकन पर्यटकलाई सेवा दिइरहेको थियो। अधिकांश युरोपियन तथा अमेरिकन पर्यटक नयाँदिल्ली हुँदै नेपाल आउँथे। गत वर्ष जेटको उडान बन्द भएपछि पर्यटक आवागमनमा त्यसको ठूलो असर परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
अहिले अन्य एयरलाइन्सले जेटको ठाउँ लिए पनि सुरूका १/२ महिना त्यसको मारमा पर्यटक परेका थिए। नयाँदिल्ली-काठमाडौंको भाडा आकाशिएको थियो।
त्यसपछि भने जेटको बजार टर्किस, कतार एयरवेज जस्ताले लिएको व्यवसायी अमात्यको भनाइ छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक २६, २०७६, ०३:१०:००